नेत्रराज र रामचन्द्र सापकोटाद्धारा नगर सहसचिव र सदस्य पदमा उमेदवारी घोषणा – उज्यालो खबर
नेत्रराज र रामचन्द्र सापकोटाद्धारा नगर सहसचिव र सदस्य पदमा उमेदवारी घोषणा
गैँडाकोट । नेकपा एमाले गैँडाकोटको कार्तिक ११ गते हुँदै गरेको एकताको प्रथम अधिवेशनमा गैँडाकोट नगरपालिका वडा नं. ९ थुम्सीका २ युवा नेताले पार्टिको नगर सहसचिव र नगर सदस्य पदमा उमेदवारी घोषणा गरेका छन् । नेकपा एमालेका युवा नेता तथा हालका नगर सचिवालय सदस्य नेत्रराज सापकोटा र रामचन्द्र सापकोटाले क्रमशः नगर उपसचिव र नगरसदस्य पदमा उमेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् ।
नेकपा एमालेलाई जरैदेखि बलियो बनाउन मैले सहसचिवमा उमेदवारी दिने निधो गरेको छु नेत्रराज सापकोटाले भने: “मेरो उमेदवारी पार्टिलाई बलियो र गुट रहित ढंगले अगाडी बढाउनु हुनेछ ।”
विगतमा पार्टिभित्र केहि अन्तरविरोध देखिएको भएपनि यो अधिवेशन एकताको अधिवेशन समेत आफुले नेतृत्व गर्ने अवशर पाउनेमा विश्वस्त रहेको जानकारी दिए । युवासंघका विभिन्न फोरममा रहेर काम गरेका सापकोटा जुझारु युवा नेताका रुपमा परिचित छन् ।
नगर सदस्य पदका आकांक्षी रामचन्द्र सापकोटाले युवाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै आफुले नगरसदस्य पदमा उमेदवारी दिने बताए । उज्यालो खबरको न्यूज डेक्समा कुरा गर्दै पार्टिको नगर सचिवालय सदस्य समेत उनले भने : “मेरो स्वार्थ पार्टि बनाउनु, संगठन निर्माण गर्नु र नयाँ तथा पुराना नेता कार्यकर्ताको सम्मान गर्नुहो ।” त्यहि स्वार्थका लागि मैले नगर सदस्यको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्ने निर्णय लिएको छु ।नेकपा एमाले गैँडाकोट नगरकमिटी वडा नं. ९ का सचिव समेत रहेका उनले सवै प्रतिनिधिहरुको साथ र सहयोग रहने भन्दै सके सहमतीमै नभए लोकतान्त्रीक प्रकृयाबाट भएपनि आफुलाई चुन्न आग्रह गरे ।
नगर उपसचिव र नगर सदस्यका दुवै उमेदवारहरुले वडा नं. ९ देखि नै अन्तरिक छलफल र भेटघाटलाई तिव्र बनाएका छन् । प्रतिनिधीहरुको घरमै पुगेर उनिहरुले ११ गतेको अधिवेशनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन् ।कार्तिक ११ गते होटल कालाबन्जरामा हुने एमाले गैँडाकोटको नगरअधिवेशनमा झण्डै २५० जना प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने नेकपा एमालेका सचिवलाय सदस्य तथा गैँडाकोट नगरकमिटिका ईन्चार्ज यमुनाथ आचार्यले जानकारी दिए ।